Ubuyisa ithemba entsheni “Sabona ukuthi senze le nhlangano ye-Alpha ukuze sizokwazi ukuphendula imibuzo abahlezi benayo” | News24
Ubuyisa ithemba entsheni “Sabona ukuthi senze le nhlangano ye-Alpha ukuze sizokwazi ukuphendula imibuzo abahlezi benayo”
ISITHOMBE : nosipho mkhize Umfundisi Zolani Phakathi wase-Sarpta Church
UMFUNDISI odabuka eMbo, osezinze eGillitts , uMfu Zolani Phakathi (27) wase bandleni lase Sarpta Church elise Gillitts uthe isifiso sakhe ukuqoqa yonke intsha yaleli bandla, ukuze bahlanganyele kwinhlngano eyaziwa ngokuthi yi-Alpha, lapho kusuke kukhulunywa ngakho konke okuthinta intsha kanye nokukhonza uNkulunkulu. Uthe: “Lo mhlangano we-Alpha sisuke sihlangene nentsha yase-Sarpta Church lapho sidingida khona izindaba ezithinta intsha ngayo yonke indlela, bese sibeka phambili iziwi lika Nkulunkulu nokuthi umuntu omusha omaziyo uNkunkulu kumele aziphathe kanjani,”kusho uMfu Phakathi.
Uthe iningi lentsha linenkinga yokuthi alikhululeki ngendlela uma liphakathi kwabantu abadala ekutheni bexoxe ngezinto ezibahluphayo empilweni.
Uthe “I-Alpha yenzelwe ukuthi bekwazi ukukhululeka beyintsha bexoxe ngakho konke okubahluphayo empilweni bese bethola isisombululo sezinkinga abanazo,”kusho yena.
Uqhube wathi iphupho laba phathi bebandla kwawu kuthi kusizakale intsha yaleli bandla ngoba into abayibona wukuthi intsha ihlale inemibuzo.
Uthe: “Sabona ukuthi senze le nhlangano ye-Alpha ukuze sizokwazi ukuphendula imibuzo abahlezi benayo, ngoba esikhathini esiningi sisuke singenaso isikhathi sokuyiphendula leyombuzo, ngakho i-Alpha yilapho esikwazi ukuphendula yonke imibuzo abanayo.”
Impilo kaMfu Phakathi ayizange ibe yinhle ekukhuleni kwakhe, njengoba washonelwa abazali esaneminyaka eyi-10, wakhuliswa ngugogo wakhe.
Uthe: “Emva kokushona kwabazali bami ngakhuliswa uGogo, sihlala nodadewethu naye owagula washona, kwase kushona ugogo ngo-2006, ngithe ngisabheke lokho kwaphinde kwashona u-Anti wami owafa ngesihluku esikhulu ngesikhathi engenelwa abantu emzini wakhe bamdlwengula bambulala,”kuho yena.
Uthe isikhathi sabanzima kakhulu emva kokushona kwamalungu onke omndeni.
Uqhube wathi wabuyelwa yithemba ngesikhathi kufika amalungu ebandla lase Sarpta bezonikela ngokudla, watholana noMfu Hendry Duncan ongasekho emhlabeni, owamsiza emva kokuba ezwe udaba lwakhe.
Uthe: “UMfu Hendry Duncan wangithatha wangigona njenge ngane yakhe wangisiza kukho konke engangikudinga, ngoba ngase ngilahlekelwe yithemba, nginga siboni isizathu sokuphila, kwaba nzima kakhulu , kodwa ngosizo lwama lungu ase Sarpta ngakwazi ukubona ukuthi angisele ngedwa kodwa ngisele noNkulunkulu ongithandayo,” kusho yena.
Emva kokuba ethathwe uMfu Duncan, wahlala naye eGillitts , wakwazi ukuqhubeka nezifundo zakhe zamatikuletsheni, waphinde wathola iziqu zakhe zobufundisi neziqu ze-Logistics Management.
Uthe: “Ngibonga uNkulunkulu ngoba ngabe angikho la engikhona ukube ubengekho nami, ngiyakuthanda ukuba wumfundisi nokusiza intsha yingakho ngiyimema ukuba inhlanganyele kanye nathi njalo ngoMsombuluko ngo 6 kuya ku 8.30 ebusku, ukuzofundisana ngezwi lika Nkululunkulu nokunye,”kusho uMfu Phakathi.
Uma kukhona othanda ukwazi kabanzi ngenhlangano ye-Alpha angaxhumana noMfu Zolani Phakathi enombolweni ethi: 074 520 1987 noma kwi kheli le email elithi:zolakampume@gmail.com
Road name: M3 Phi;;i[ Kgosana Drive Inbound